“पिल्सिएको परदेशी मन”:कवितामा यथार्थको उत्कृष्ट प्रतिविम्ब ( समिक्षा ) « Osvevo
“पिल्सिएको परदेशी मन”:कवितामा यथार्थको उत्कृष्ट प्रतिविम्ब ( समिक्षा )
Published On :3December, 2021 4:17 am
राम लामाको “पिल्सिएको परदेशी मन”:कवितामा यथार्थको उत्कृष्ट प्रतिविम्ब
_डा. टङ्क उप्रेती
साहित्य समाजसेवा र व्यापारमा स्थापित राम लामा अविनाशी ‘पिल्सिएको परदेशी मन’ नामक नविनतम कविताकृती लिएर नेपाली साहित्य आकाशमा उदायका छन्।
नेपाली र अग्रेजी भाषामा एकै साथ एउटै संग्रहमा प्रकाशित लामाका २६ वटा कविता संग्रहित छन्। मौलिक नेपाली भाषामा रचना गरिएका यी कविताहरुको अंग्रेजी अनुवाद महेश पौड्यालले गरेका छन् भने कृतिको अंग्रेजी शीर्षक Smoldered Heart Of An Emigrant राखिएको छ।
पिल्सिएको परदेशी मन कृतिको नामले नै प्राय: सबै कविताहरुको मूल विषयलाई सफलतापूर्वक समेटेको छ। कविताहरुको अन्तरवस्तुको अघ्ययन गर्दा यो शीर्षक सार्थक र सान्दर्भिक लाग्दछ।
जब व्यक्ति आफ्नो रैथाने ,भूमि, संस्कृति, समाज र प्रकृतिबाट टाढा पुग्दछ स्वभाविकरुपमा ती प्रति ऊ अझ संवेदनशील बन्दछ। तिनका प्रत्येक स साना स्मृति, झल्को, सन्दर्भ र झिल्काहरु अझ बढी भएर व्यक्तिका नजिक आउँदछन्।
प्रवासमा विभिन्न कारणहरुले पुगेका व्यक्तिहरुले अनुभव गर्ने र गरेका यथार्थ हो यो। अझ संवेलनशील मन समानुभूति गर्न सक्ने क्षमता र कवि मन भएको व्यक्तिलाई त, यी र यस्ता कुराहरुले अझ गहिरोसंग छुन्छन् ,द्रवित बनाउँछन् र मुटुनै निचोरेर गम्भीर अभिव्यक्ति दिन बाघ्य बनाउँछन्।
कवि राम लामा अविनाशी पनि यस्तै पंक्तिमा सशक्त ढंगले उभिन सफल कवि हुन भन्न उनको ‘पिल्सिएको परदेशी मन’ कविता संग्रह नै पर्याप्त छ।
प्रवासमा उनले प्रत्यक्ष परोक्ष , अरुले अनुभव गरेका परिदृश्यहरुको साक्षी बस्दाको समानुभूति र तिनको कलात्मक अभिव्यक्ति उनका कविताहरुमा पाईन्छन्।
प्रवासमा उनले देखे भोगेका माया, प्रेम, अनुराग, घातप्रतिघात, सपना ,कल्पना तिनको प्राप्ति र प्राप्त हुन नसकेका अवस्था र धोका उनका यो संग्रहका मूल विश्षताहरु हुन्।
उनी सोझै देश प्रेमको नारा कवितामा लगाउँदैनन् तर प्रत्येक कविताको अर्न्तयमा त्यो अविभाज्य र अन्योन्याश्रित भएर आएको छ। ग्रामिण विम्वले बोकेका गहिरा अनुभूति र सिर्जना गरेको दृश्यचित्रले आफै नेपालीपन र राष्ट्रप्रेम प्रस्तुत गरेका छन् कवितामा।
लामो समय प्रवासमा बसेको भए पनि कवि अभिनाशीले नेपाली भाषाको मौलिकता/ठेटपनालाई पर्याप्त मात्रामा आफ्ना कविताहरुमा प्रयोग गरेका छन्।
बकुर्सी मार्दै ,उर्लिएको बैंस,खोकिलामा ,टुलुटुलु ,कुलेलम ठोकिहान्ने ,झ्याप्प ,रन्कोमा ,दैलो ,अगेना, अगुल्टो ढोस्ने जस्ता शब्दहरुको प्रयोगले कवितालाई मौलिक र नेपालीपन युक्त बनाएको छ।
अंग्रेजी भाषामा समेत प्रकाशित यी कविताहरुले नेपाली भाषाको मिढास र मौलिकपनलाई अन्य भाषी पाढकहरु सम्म पुर्याउन मघ्दत गर्नेछ। कवि लामाले आफ्ना कविताहरुमा फरक फरक अर्थ भएका स्वतन्त्र शब्दहरुको संयोजन व्दारा शब्दहरुको सार्मथलाई बढाई नयाँ अर्थ सिर्जना गर्ने कलात्मक प्रयोग पनि केही मात्रामा गरेको पाइन्छ।
निस्ता अक्षरहरु,घमण्डको रन्को ,निर्मोही साँझ,आकांक्षाका भकारी, पश्चातापको घेरा,उपयोगको म्याराथुन यस्ता शक्तिशाली प्रयोगका केही उदाहरणहरु हुन्।
कवि लामा मूलत:आफ्ना अनुभूतिहरुलाई मानवीय जीवनका अँघ्यारा/उज्याला पक्षहरुमा साधारणीकरण गर्दै कविता मार्फत अभिव्क्ति दिन्छन्। यो संग्रहमा उनले अधिकांश कवितामा विचारलाई कलाको जलपले छोपेर प्रस्तुत गरेका छन् भने कतिपयमा विचारलाई प्रधानता दीएर अगाडी आएका छन्।
सरल बिम्व र स्तरीय प्रचलित भाषामा कविता सर्जना गर्दै आएका राम लामा अविनाशीबाट नेपाली डायस्पोरा साहित्यले निकै महत्वपूर्ण कृति प्राप्त गरेको छ।
अनुभूतिले छपक्कै भिजेर लेखिएको कवि राम लामा अविनाशीको पिल्सिएको परदेशी मनमा संग्रहित एक कवितांश:तिम्रो पढाइका हरेक सर्टिफिकेटहरु
तिम्रो पढाइका हरेक सर्टिफिकेटहरु
मेरो पसिनाका थोपा थोपाले लेखिएका छन्
कूनै अक्षर ,अरबमा चर्को घामले निस्किएका पँसिनाले लेखिए
कुनै अक्षर,कोरियामा पग्लेका हिउँका थोपा थोपाले लेखिए … I
सम्मानयोग्य व्यक्तिका सालिकमा यस्तो अपमानजनक व्यवहार गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । स्मृति पार्क कहिल्यै
सिरिरिरि हावा छिम्केश्वरी डाँडैमा ( नियात्रा )
सिरिरिरि हावा छिम्केश्वरी डाँडैमा ‘गाडी त यहाँँसम्म मात्र हो। अब आधा घन्टा जति हिँडनुपर्छ।’ अवगत
कोक्ल्याँटे जिन्दगी ( कविता )
कोक्ल्याँटे जिन्दगी मायामा पग्लिन खोज्छ घ्रिणामा डुबुल्की मार्छ हाँसोमा हुम्मिन खोज्छ क्रोधमा बुर्कुसी मार्छ आफन्तको
झल्यास्स ! ( लघुकथा )
झल्यास्स ! साउनको अन्तिम सोमबार,गृहलक्ष्मीको भित्री चाहना–पशुपति नगई सुख पाइएन । निकै लामो लामपछि ठेलम्ठेल
संयुक्त राष्ट्रसंघ , १३ माघ- संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानमा अहिले तत्कालै करिब ३ अर्ब ६० करोड
काठमाडौँ, १३ माघ -सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९०० ले घटेर रु
राँझा, १३ माघ :नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा १२ घण्टाभित्र दुई कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ ।